October 2013 - Page 46 of 46 - iftineducation.com
iftineducation.com – Inkabadan 25 idaacadood ayaa waxay hadda ka shaqeeyaan caasimada Somaliya ee magaalada Muqdisho taasi oo jaan iyo dhalan rog maskaxeed sameeyey. Xubno katirsan wasaarada Warfaafinta Somaliya ayaa usheegay Warqaad.com inay Xukuumada gaar ahaan Wasaarada Warfaafinta ay wado barnaamij lagu xirayo in kabadan 20 idaacadood oo aan hadda wax muuqda ka qaban Muqdisho. Saraakiil katirsan Xafiiska Wasaarada Warfaafinta ayaa sheegay…
iftineducation.com – Barakacayaal ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa ka cabanaya daryeel xumo dhinaca nolosha iyo caafimaadka ah, xilli carruur badan uu ku dhacay cudurka shuban biyoodka. Cabdullaahi Saleebaan Cali oo kamid ah barakayaasha ayaa sheegay in in muddo ah aysan helin wax gar gaar ah, taasoo keentay inay soo wajahdo nolol xumo iyo dhibaato dhinaca caafimaadka ah. Wuxuu…
iftineducation.com – Xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay waddo qorshe ay ugu gogol xaarayso shirar lagu midaynayo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada dhexe. Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in dhowaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug uu u ambabixin doono wafdi ka qeyb-qaadan doona meel marinta nidaamka federaalka ah iyo dowlad…
iftineducation.com – Channel 4 TV ayaa waxaa ay baaritaan ku sameysay hogaamiyaha weerarkii Westgate Mall ee magaalada Nairobi dalka uu u dhashay iyo diinta uu heysan jiray. Xog badan oo TV-gan uu helay ayey ku sheegeen inuu ninkaasi ahaa mid u dhashay dalka Kenya isla markaasna heysan jiray diinta Christian ka, waxaana sidoo kale uu ka mid ahaa ciidanka gaar ee…
iftineducation.com – Sarkaalka ugu sareeya ciidamada Melateriga dalka siraliyoon ayaa sheegay in aysan ciidamadooda kala baxayn dalka Somalia waxana uu shaaca ka qaaday in ay hanjabaado ka kulmeen dhaq dhaqaqa Al-shabab. Alfred Paolo Conteh,wasiirka difaaca dalkasi ayaa sheegay in Ciidamadooda ay qeyb ka yihiin kuwa nabad dhalinta u jooga Somalia ee Midowga Afrika ka socda. Halkaan hoose riix si aad udhageysato…
iftineducation.com – Maleeshiyaad Katirsan Maamulka Hargeisa ee uu Hogaamiyo Danbiile Siilaanyo ayaa Cagta Mariyey Goobo Badan oo Kamida Magaalada Laascanod iyagoona Dhibaato Xoogan ugaystay Danyarta iyo Waliba Dadka Barakacayaasha ah. Wariyaha Tvga Univesal Aadan Maxamed karaama oo maalintii shalay diyaarinayay qaabka ay kooxdan dawladda hoose isku magacawday u dumisay suuqa Tuulo qodax iyo waliba Dareenka Shacabka ayaa Saaka Jidhdil Loo gaystay…
iftineducation.com – Guddiga baarlamaanka Kenya u qaabilsan xagga gaashaandhigga ayaa la filayaa inay ugu baaqaan dawladda Kenya in la xidho dhammaan xerooyinka qaxootiga ee Soomaalida ee ku yaal dalkaasi, sababa nabadgelyo awgood. Mudane Ndun’u Gethengi oo guddoomiye u ah guddiga difaaca ee baarlamaanka Kenya ayaa BBC-da u sheegay in uu hayo warar sheegaya in ‘ xerooyinka qaxootiga loo isticmaalo xarumo tababar’,…